အိမ် - _ခြံကျယ်_နေရာကောင်းငှါးရန်ရှိသည် Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
အိမ် classified: _ခြံကျယ်_နေရာကောင်းငှါးရန်ရှိသည်
#လုံးချင်း၂ထပ်တိုက်_ခြံကျယ်_နေရာကောင်းငှါးရန်ရှိသည် +++++++++++++++++++++++++++++++ 🏡🏡တာမွေမြို့နယ်၊ အောင်မင်္ဂလာအိမ်ရာ 🏡🏡အကျယ်အဝန်း(၆၀ပေ × ၈၀ပေ)ခန့်ရှိ 🔐🔐2_RC, 2_Single Bedroom. 🛀🛀5_Master Bedroom, 10_Air/con. 🚗🚙ခြံဝန်းကျယ်၊ ကားပါကင်အဆင်ပြေသည်။ 🚩🚩ကုမ္ပဏီ ရုံးခန်း၊ မိသားစုနေ၊ လူနေ/ရုံးခန်း၊ အဆင်ပြေပြီး၊ မြို့ထဲနှင့်အနီးဆုံးနေရာတွင်တည် ရှိသည်။ 🌠🌠ဗညားဒလလမ်း၊ယုဇနပလာဇာ အနီးတွင်တည်ရှိသောကြောင့် သွားလာရေးအဆင်ပြေသည်။ 💵💵စျေးနှုန်း_၃၈သိန်း 📲 09-752757547 📲 09-778969226 📲 09-250998522 📲 09-340185131
တောင်ဥက္ကလာ လုံးချင်း ဌားမည်
(၉)_မိုင် ရှိ ၃ထပ်တိုက် ငှားမည်
အရွယ်အစား 832.00 Square Feet